« ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: ကြိုတင်စောင့်တပ်ဖွဲ့အိမ်ယောဘကိုအောင်လိုက်တဲ့အခါ
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: အဆင့် Crossing အတွက်ရော်ဘာ Coating »
သူ Work ပြုလုပ်ခြင်း Turhal Yesilyurt ဘူတာနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်က Wall မှ Artova, Bekdig ရဲ့, Suluova, အမျိုးအစား Panel ကို
STATE ရထားလမ်း Administration (TCDD)4တူရကီအထွေထွေဒါရိုက်တာသမ္မတနိုင်ငံ။ ဒေသန္တရ SERVICE ကိုရုံးဝယ်ယူမှုနှင့် Inventory CONTROL
Artova, Bekdig ရဲ့, Suluova, Turhal နှင့် Yesilyurt ဘူတာအဆိုပါအများပိုင်ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးဥပဒေအဆိုပြုချက်ကိုသာအီလက်ထရောနစ် ECAP ထဲကဖြစ်လိမ့်မည်, 4734 အပိုဒ်အရသိရသည်အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများကချီးမြှင့်ပါလိမ့်မည်စီးပွားရေးဆောက်လုပ်ရေးအလုပ် 19 အမှတ်ပြုလုပ်ခြင်းအမှတ်တရပတ်ဝန်းကျင်အဆိုပါ Panel ကိုရန်။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်:
KN: 2019 / 435071
က) အမည်: STATE ရထားလမ်း Administration (TCDD)4၏ TC အထွေထွေဒါရိုက်တာ။ ဒေသန္တရ SERVICE ကိုရုံးဝယ်ယူမှုနှင့် Inventory CONTROL
ခ) လိပ်စာ: ဘူတာလမ်း 1 58030 Sivas / Sivas
ဂ) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်နံပါတ်: 3462217000 - 3462237677
က) အမည်: Artova, Bekdig ရဲ့, Suluova, လုပ်ငန်းခွင်ပြုလုပ်ခြင်း Turhal Yesilyurt ဘူတာနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်က Wall မှအမျိုးအစား Panel ကို
9.500 မီတာရှည်လျားခြံစည်းရိုး panel ကတစ်ဝါယာကြိုးလှောင်အိမ်မီတာ 7500, 2000 မီတာအတုဆောက်လုပ်ရေး၏မြို့ရိုးကိုပတျဝနျးကငျြ 250 မီတာ
က c) / Place ကိုအပ်စေ: Samsun, Amasya - Tokat
ဃ) ကာလ / Delivery Date: 150 ပေးပို့တည်နေရာ (တရာငါးဆယ်) ပြက္ခဒိန်ရက်ပေါင်းမှ။
က) ပစ္စည်းဝယ်ယူရေး (နောက်ဆုံးကမ်းလှမ်းမှု) ရက်စွဲနှင့်အချိန်: 08.10.2019 - 14: 00
ခ) တင်ဒါကော်မရှင်အစည်းအဝေးများ၏အရပ်ဌာန (ကမ်းလှမ်းမှုကို၏အီးမေးလ်လိပ်စာကိုဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မည်): Sivas xnumx.bölg TCDD ညွှန်ကြားမှုအစည်းအဝေးအခန်း (xnumxnc ညီထပ်, အခန်းအမှတ် 4)
ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်တင်ဒါရလဒ်များအပေါ်ကွန်ကရစ်အမှတ်တရ Panel ကို Making ပတျဝနျးကငျြ 19 / 09 / 2018 TCDD4။ တူရကီပြည်နယ်မီးရထား TCDD 14.710 ၏ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်တင်ဒါရလဒ်ပြုလုပ်ခြင်းပတ်ဝန်းကျင်ကွန်ကရစ်တံတိုင်းပေါ်ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားမှုMıntıka4မီတာ Panel ထဲကအမျိုးမျိုးသောကီလိုမီတာ။ ယ်ယူခြင်း၏ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားမှုနှင့် Inventory ထိန်းချုပ်ရေးဌာန (TCDD) 2018 / 410307 4.533.043,00 JCC အရေအတွက်ကန့်သတ်ချက်တန်ဖိုးကို TL နှင့် 5.828.773,004TCDD အကြောင်းကိုကုန်ကျထားတဲ့ TL ။ အဆိုပါ 14.710 ခုနှစ်တွင်စီးပွားရေးလေလံ7နှင့် 4.902.832,00 တစ်ခုတည်းဖော်ဆောင်ရေးနှင့်တည်ဆောက်နေကုမ္ပဏီကတင်ဒါအနိုင်ရရှိလိုက်ပြီပေးထား£ Lima လေလံဆွဲကြပြုလုပ်ခြင်းပတ်ဝန်းကျင်ကွန်ကရစ်တံတိုင်းပေါ်မှာအမျိုးမျိုးသောဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားမှုMıntıkaမီတာ Panel ကိုကီလိုမီတာ။ 14.710 မီတာကွန်ကရစ်နံရံ panel ကို type ကိုထွေးပွေ့အပေါ်စျေးပြိုင် ...
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: လုပ်ငန်းခွင်ပြုလုပ်ခြင်းပတ်ဝန်းကျင်က Wall ပေါ်ကွန်ကရစ် Panel ကို 18 / 08 / 2018 ကွန်ကရစ်အမှတ်တရ Panel ကို STATE ရထားလမ်း Administration (TCDD)4၏ TC အထွေထွေဒါရိုက်တာပေါ်လုပ်ငန်းဖော်ဆောင်ရေးပတျဝနျးကငျြ။ ဒေသန္တရဝယ်ယူရေးနှင့် Inventory CONTROL SERVICE ကိုရုံး TCDD4။ အမျိုးမျိုးသောကီလိုမီတာဘယျအရာဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်ပတ်ဝန်းကျင်အတွက် panel ကမီတာ TYPE ပေါ်တွင်ကွန်ကရစ်နံရံ 9.650 ဒေသဆိုင်ရာမန်နေဂျာ ZONE အများပြည်သူဝယ်ယူရေးဥပဒေနှင့်အညီပွင့်လင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအမှတ် 4734 19 အပိုဒ်များကချီးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်။ တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2018 / 410308 1-အုပ်ချုပ်ရေးက) လိပ်စာ: ဘူတာလမ်း 1 58030 Sivas / Sivas ခ) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်နံပါတ်: 3462217000 - 3462237677 ဂ) e-mail, ...
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: တူရကီ-Eskisehir YHT လိုင်း Making ပတ်ဝန်းကျင်စစ်ကူကွန်ကရစ် Panel ကိုအပေါ် အခြေခံ. 01 / 08 / 2017 Making သမ္မတနိုင်ငံ STATE ရထားလမ်း Administration ရုံးချုပ် 4734 အပိုဒ်အရသိရသည်အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများကချီးမြှင့်ပြုမိဆောက်လုပ်ရေးအလုပ် 19 ရေတွက်ပြည်သူ့ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးဥပဒေပတ်ဝန်းကျင်အားဖြည့်ကွန်ကရစ်အခြေခံပြီး Panel ကို၏ (TCDD) YHT ဒေသန္တရရုံးတူရကီ-Eskisehir YHT လိုင်းပတ်ဝန်းကျင်အားဖြည့်ကွန်ကရစ်၏တူရကီ-Eskisehir YHT လိုင်းအခြေခံပြီး Panel ကို ဒါဟာဖြစ်လိမ့်မည်။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်။ တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2017 / 376066 1-အုပ်ချုပ်ရေးက) လိပ်စာ: Eti ခရိုင်, Celal Bayar Boulevard အဘယ်သူမျှမ၏ YHT ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားမှု: 78, 1 ATG Mall က။ ကြမ်းပြင်ÇANKAYA / တူရကီခ) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်နံပါတ်: 3123090515 / 75392 - 3123090575 ဂ) E-Mail ကနေရပ်လိပ်စာ: koksalgenc@tcdd.gov.t ဃ) ...
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Panel ကိုYaptırılacaktırပတ်ဝန်းကျင် 22 / 05 / 2017 STATE ရထားလမ်း Administration (TCDD)4၏Yaptırılacaktır Panel ကို TC အထွေထွေညွှန်ကြားရေးမှူးပတျဝနျးကငျြ။ အလုပ် 598 အမှတ်အပိုဒ်အများပြည်သူဝယ်ယူရေးပညတ်တရား၏ 030 အားဖြင့်ပွင့်လင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကချီးမြှင့်ပါလိမ့်မည်ဘယျအရာဆောက်လုပ်ရေးပတ်ဝန်းကျင် PANEL TYPE အထက်တွင် 601 မီတာကွန်ကရစ်နံရံကြားဒေသဆိုင်ရာရထားလမ်းပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုဝန်ဆောင်မှုမန်နေဂျာSİVAS Samsun LINE KM.240 + 4000-4734 + 19 ။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်။ တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2017 / 199014 1-အုပ်ချုပ်ရေးက) လိပ်စာ: ရုံးအမှတ်42 Sivas / Sivas ခ၏ Muhsin Yazicioglu Boulevard TCDD xnumx.bölgညွှန်ကြားမှု) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်နံပါတ်: 58080 - 3462217000 ဂ) E-Mail ကနေရပ်လိပ်စာ: tcddsivasyolmd @ Hotmail .com ဃ) တင်ဒါ ...
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Yaptırılacaktırပတ်ဝန်းကျင်က Wall ပေါ်ကွန်ကရစ် Panel ကို 18 / 08 / 2018 STATE ရထားလမ်း Administration (TCDD)4၏Yaptırılacaktırသမ္မတနိုင်ငံအထွေထွေညွှန်ကြားရေးမှူးအပေါ်အမှတ်တရကွန်ကရစ် Panel ကိုပတျဝနျးကငျြ။ ဒေသန္တရဝယ်ယူရေးနှင့် Inventory CONTROL SERVICE ကိုရုံး TCDD4။ အမျိုးမျိုးသောကီလိုမီတာဘယျအရာဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်ပတ်ဝန်းကျင်အတွက် panel ကမီတာ TYPE ပေါ်တွင်ကွန်ကရစ်နံရံ 14.710 ဒေသဆိုင်ရာမန်နေဂျာ ZONE အများပြည်သူဝယ်ယူရေးဥပဒေနှင့်အညီပွင့်လင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအမှတ် 4734 19 အပိုဒ်များကချီးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်။ တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2018 / 410307 1-အုပ်ချုပ်ရေးက) လိပ်စာ: ဘူတာလမ်း 1 58030 Sivas / Sivas ခ) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်နံပါတ်: 3462217000 - 3462237677 ဂ) e-mail လိပ်စာ ...
ပတျဝနျးကငျြက Wall လုပ်ခြင်း, Sivas xnumx.bölg၏ TCDD ညွှန်ကြားမှု
TCDD Sivas4။ ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားမှု
Muhsin Yazicioglu Boulevard အဘယ်သူမျှမ: 1 / Sivas
Sivas, Sivas Türkiye + Google Maps ကို
ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်တင်ဒါရလဒ်များအပေါ်ကွန်ကရစ်အမှတ်တရ Panel ကို Making ပတျဝနျးကငျြ
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: လုပ်ငန်းခွင်ပြုလုပ်ခြင်းပတ်ဝန်းကျင်က Wall ပေါ်ကွန်ကရစ် Panel ကို
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: တူရကီ-Eskisehir YHT လိုင်း Making ပတ်ဝန်းကျင်စစ်ကူကွန်ကရစ် Panel ကိုအပေါ် အခြေခံ.
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Panel ကိုYaptırılacaktırပတ်ဝန်းကျင်
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: တူရကီ Sincan အဆိုပါ Panel ကိုခြံစည်းရိုးများနှင့်ဝါယာကြိုးခြံစည်းရိုးလုပ်ဖျက်သိမ်းအမျိုးအစားİhata Sincan မီးရထား Depot အစားထိုးပတ်ဝန်းကျင်အမျိုးမျိုးသောကီလိုမီတာအကြား YHT လိုင်း
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: ယောဘသည်Yaptırılacaktırပတ်ဝန်းကျင် Erzurum နှင့် Kars မှ Fields ဘူတာနှင့်စီရင်သံခြံစည်းရိုး Panel များ
ကတ်ကြေးတင်ဆောင်လာသောနှင့်ကုမ္ပဏီ၏ကတ်ကြေးဝယ်ယူနှင့်အတူ panel ကိုနှင့် panel ကို-တင်သောစက်အနိုင်ရ TCDD လှည်းတင်ဒါကြေညာခဲ့သည်ခဲ့ကြသည်
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: kmxnumx နှင့်အတူတောင်ပေါ်မှာ Topdag ၏-Sarikamish စခန်းများ kmxnumx + 1283 700 လုပ်ငန်းဖော်ဆောင်ရေးရိုးကိုဆက်ထိန်းထားအဖြစ်